I-AutoCAD 2016. Ukuphela kwamaphepha-mvume angapheliyo. -Izixhobo zeGeofumadas
NgoJulayi, 2015 AutoCAD-AutoDesk
Njengomphumo wendalo wokudityaniswa kwehlabathi, okunxibelelaniswayo kwaye okungaqondakaliyo, isoftware iyayeka ukuba ibe yimveliso yebhokisi kwaye ibe yinkonzo. I-AutoDesk ayisiyiyo into esele siyibona kunye neAdobe, iiNkqubo zeCarl, Corel, ukubala ezimbalwa.
I-AutoDesk ivakalise ukuba kulo nyaka i-2015 iya kuba yeyokugqibela apho ukuthengwa kwamaphepha mvume okuhlala kungathengwa khona. Ke ngoku, nabani na othenga ilayisensi uya kwenza intlawulo yenyanga okanye yonyaka kunye nelungelo lokufikelela kwiinguqulelo zamva kunye neenkonzo ezongezelelekileyo, kuxhomekeka kwinani elihlawulweyo.
Ixabiso le-AutoCAD LT
Ngokumalunga namaxabiso, ukhetho olubi alubonwa, kuthathelwa ingqalelo ukuba iminyaka emithathu nganye inguqulelo ye-AutoCAD ibekelwe umda ngokutshintsha kwefomathi ye-DWG. Okwangoku, ukuba umntu ufuna ukuthenga i-AutoCAD LT, banokuhlawula kwisithuba seminyaka emithathu, i-360 yeedola ngonyaka, kwi-1,080 iyonke kwiminyaka emithathu. Oku kunokubonwa kolu luhlu lulandelayo, ngokuqinisekileyo alucacanga njengoko kufanelekile kwimeko yokuhlawulwa kwenyanga apho kubonakala ngathi umntu uhlawule i-540 iyonke ngonyaka.
I-AutoCAD 2016 intengo
Kule meko, iilayisensi zonyaka ziya kwiidola ze-1,600 ukuba ubhaliso lweminyaka emithathu lukhethiwe. Ukuba umntu ufuna ilayisensi yenyanga enye, ixabiso liyi-210 yedola.
Kufuneka sivavanye ukuba iyingenelo njani. Kwimeko yeeNkqubo zeMicrosoft, iiphakheji abazisusayo zinomtsalane kuba bavumela ukufikelela kwiipotifoliyo zemigca enjengoBunjineli, izityalo, izixhobo, njl. Nangona kunjalo, ngaloo software ayisekho ukuba ibonakale, kuba ubomi beemveliso zandiswa ngakumbi. Ngenxa yoko, ngubani osezandleni zakhe Microstation V8 yonyaka 2002, akanangxaki kuba ifomathi ye-DGN ithatha iminyaka ye-14 ukuba ifane. Ke abantu bagxumela kwiinguqulelo ezintsha kwimijikelezo ukuya kuthi ga kwi-6 kunye ne-8 iminyaka, xa ukuphuculwa okugqithileyo kwiinguqulelo ezintsha kunzima ukuba nakho.
Ngokunokwenzeka inomdla kwiimeko zentengiso yangoku, apho kukho amaxesha aneeprojekthi ezinkulu, ezihlala iinyanga ezininzi, ezenza umdla ngakumbi ukubandakanywa kwiindleko zeprojekthi yokuqeshiswa kwamaphepha-mvume, ukuba sinokubiza Ngale ndlela, endaweni yokuthenga iilayisensi ezininzi ezingapheliyo ezithi zichithwe kamva.
Inyaniso kukuba akukho kubuya, akukho nto eseleyo kodwa ukulungelelanisa ukutshintsha nokufumana izibonelelo.
Ulwazi oluninzi lunokufumaneka kunye nomnikezeli wendawo, okanye kwisitoreji se-intanethi AutoDesk
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iikhosi ezili-9 ze-GIS ezijolise kulawulo lwezixhobo zendalo
Post Next Iimephu zeWebhu zivuselela iimephu zembaliOkulandelayo »
4 Iimpendulo "kwi-AutoCAD 2016. Ukuphela kwamaphepha-mvume angapheliyo."
unobani onokuyicaphuna ilayisenisi engapheliyo ye-AutoCAD
Ndisenakho ukungabaza ukuba ngaba iilayisensi zomthetho.
Kufuneka ukhangele inombolo ye-Whatsapp ayibhengezayo khona.
Ucinga ntoni ngale ndawo iyithengisa nge $ 60 -> https://latiendadelaslicencias.com/licencias-autocad/licencia-de-3-anos-de-autodesk-autocad-2018-windows-7810.html
Ndicinga ukuthenga enye kodwa andiyithembi.